पाँच ब्रुमरले एक सातामा ९२ टन धुलो उठाए ! - पाँच ब्रुमरले एक सातामा ९२ टन धुलो उठाए !
२०७५, २० चैत्र, 08:28:28 AM
काठमाडौं । काठमाडौंका सडकबाट एक सातामै ९२ टन धुलो संकलन भएको छ । गत बुधबारबाट काठमाडौं महानगरपालिकाका पाँच ब्रुमरले सडक सफा गरिरहेका छन् ।
महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागका अनुसार राति ८ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म ब्रुमरले सडक बढारिरहेका छन् । हालसम्म बानेश्वर, बालकुमारी, थापाथली, रत्नपार्क आसपास, पुतलीसडक, कलंकी र सोह्रखुट्टे क्षेत्रका सडक ब्रुमरले सफा गरेका छन् । संकलित धुलो टेकु ट्रान्सफर स्टेसनमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको महानगरले जनाएको छ ।
महानगरका ब्रुमर राति ८ बजेबाट नगर प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा सडकमा निस्कन्छन् । सडक सफा गर्न निस्किएका कर्मचारीले एक सातामा मिश्रित प्रतिक्रिया पाएका छन् । ब्रुमर चल्दा मानिस हेर्न निस्कन्छन्, भिडियोसमेत बनाउँछन् ।
‘धेरै मानिसको चासो छ । हेर्ने र भिडियो खिच्नेहरू भेटिन्छन्,’ व्यवस्थापन विभागको कार्यालयमा एक ब्रुमरचालक भनिरहेका थिए, ‘कोहीले राम्रो कामको थालनी भएको भन्दै स्याबासी दिन्छन्, कोही मौन बस्छन्, कसैले गाली गर्छन् ।’ उनका अनुसार केही स्थानीयले ब्रुमरले सडक सफा गरिरहँदा ‘नाटक’को संज्ञासमेत दिने गरेका छन् ।
ब्रुमर सञ्चालनमा आएपछि सडकमा धुलो कम भएको महानगरको दाबी छ । तर, विभिन्न संरचना निर्माणका कारण सडकमा धुलो आउने क्रम नरोकिएको महानगरको गुनासो छ ।
ब्रुमरले बढारेपछि सफा भएको सडकमा निर्माणस्थलबाट निस्कने गाडीले हिलो सडकमा ल्याउने र सुकेपछि उड्ने गरेको वातावरण प्रशासन महाशाखाकी प्रमुख पोखरेलले बताइन् । ‘निर्माणस्थलबाट निस्कने सवारीसाधनले सडकमा ल्याउने हिलोका कारण समस्या भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी सबैसँग समन्वय गरेर सडक सफा राख्ने प्रयासमा छौँ ।